Du'aa'iin akkamitti qeebalamti? - NuuralHudaa
Du’aa’iin ibaadaadha. Ibaadaan hundi ikhlaasaan hojjatamtu malee hin qeebalamtu. Rabbi qofaaf jecha godhuu fii Rabbi qofa kadhachuutu ikhlaasa. Duaaiin like fii share barbaada godhan like fi share bira hin kuttu. Rabbiin ol tahe akki je’e, “Rabbi qofaaf amantii qulqulleeysaati isa kadhadhaa..”Ghaafir: 14
Karaa Nabiyyii sallallaahu aleeyhi wasallam qunnamuu
Yaqiinaan dhugoomsaa kadhachuu
Qaamaa qalbiin Rabbiif if gad qabaa, Rahmata isaa kajeelaa kadhachuu
Jala muranii nin arkadhaan kadhachuu, kadhaas itti jajjabeeysuu
nama itti hojjatee namas itti yaamu nu haa taasisu isinis Rabbi anumaaf ifaajjan isiniin haa jedhu galatoomaa
Hayye Amiiiin Alahu Amiiiiiin
Rabbi nuuf haa lafissu
As wr wb Amiiiiiiin Amiiiiiiiiiin inshaaAllhinsha
ws wr wb rabbiin amrii hundaa nuf haa laafisuu
Abdi Aman says:
Magarsaa Shaddiin says:
As Wr Wb Odeeffannaa Waytaawaa Nuuf Kennuu Keessaniif Guddaa Galatoomaa
rabbiin isiiniraa haa jaalatuu kaadimaani dinni wly rabbif jechaa isiin jaaladhaa rabbiin anna olliti isiin haa jaalatuu in shaa AllahJzk💔💔💔💔💔💔💔💔☝😍
yaa Rabbii yaa alhaa
galatoomaa galatoomaa rabiin isiinif haa laafisu jabadhaa
As wr wb Amiiiiiiiiiin jzk
Assallaamallekum warhmatuhlhi masha Allah
masha Allah Allhmdulilh gallaani raabbii fihaahu amallen Rabbiin isinhaajabesu inshaa Allah wanhuda baratu jira Allhamdulilh 💟🤲🤲
July 31, 2021 sa;aa 5:50 pm Update tahe